ခွေးရူးချိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ခွေးရူးချိန်
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 15, 2013 in Local Guides, Photography, Travel | 49 comments
1 ကောင်းကင်ပြာပြာနဲ့ လက်ပန်နီနီ
2 နားလိုနား သွားလိုသွား
ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘ၀ အမှတ်ရစရာ လေးပြောရရင် မစန္ဒာရေးခဲ့တဲ့ဂျီဟောသူဆိုတဲ့
၀တ္တုထဲမှာ လက်ပန်နဲ့ပါတ်သက်တာလေး ကိုဖတ်ဘူးပါတယ်။.
လက်ပန်ပွင့်ချိန် ခွေးရူးချိန် ဆိုတဲ့စာချိုးကလေးကို လက်ပန်ပွင့်ချိန် ထွေးရူးချိန်ဆိုပြီးစခဲ့တာလေးကိုပါ။
နောက်တော့ ဂီတလုလင်မောင်ကိုကိုရေးပြီး အေးအေးသွယ်နဲ့အဖွဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့ လက်ပန်ပွင့်ကောက်သီချင်းကို
“နွေမိန်တစ်ပေါင်း နေရှိန်လောင်း ရွက်ဟောင်းကြွေကျ မြေခခဲ့ပြီကွယ်”ဆိုတဲ့သီချင်းလေးက
ပြောင်းဆန်အို မျိုမကျရယ်နှင့် မြိန်လှတယ်လေး။
ကျောင်းစာထဲမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ ဦးဆောင်းရဲ့ ဒီကဗျာလေးကလဲ ရွတ်ဆိုလို့မ၀နိုင်အောင်ရှိစမြဲ။
လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ ဒီရာသီမှာ လက်ပန်တွေမြင်တိုင်းခွေးတော့မသိဘူး
အခုရက်ကတော့ မန်းလေး တစ်ဝိုက်မှာလက်ပံတွေလှိုင်လှိုင်ပွင့်တော့
ရန်ကုန်မှာ မတွေ့မိသေးဘူး .. ရန်ကုန်က ချယ်ရီပန်းကတော့ ပွင့်နေပြန်ပြီ …
လက်ပံပင်ကြီးနဲ့ လက်ပံပွင့်တွေ တွေ့ရတော့ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်သတိရသွားတယ်…။
ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်ကျောင်းပြေးရင် ခိုလှုံနေကျ ဘုန်းကြီးပေကျာင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာ
ပွင့်ဖတ်အထူကြီးနဲ့ ၀တ်ဆံတိုင်ကို ချိုးဖဲ့ပြီ
အောက်ခြေက ၀တ်ရည်တွေစုပ်ရတာ ပျော်စရာကြီး..
(သူများကတော့ အဲဒါစုပ်(သောက်)ရင် ရူးတတ်တယ်ပြောတာပဲ)
ကျနော်လဲ ဒီအချိန်ရောက်ရင် အဲဒီလက်ပံပင်တွေအောက်ရောက်နေကျ.
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀က မိန်းတောင်ဘက်ပေါက်က ထွက်ရင်
ဆင်ဖြူကန်သချိုင်းအနောက်ဘက် 73လမ်းပေါ်မှာလက်ပံပင်တွေရှိနေတာကို သတိရသဗျ။
လက်ပံတွေ ပွင့်နေလိုက်တာ.. ရဲ တွတ်နေတာပဲ.. လကုန် နောက်လဆန်း လောက်မှာကော အဲ့ဒီ ပန်းတွေ ရှိပါ့အုန်းမလား
နောက်ကျပွင့်တဲ့ အပင်တွေရှိသေးတော့ တောင်သမန်အင်းစောင်းသွားရင်တွေ့နိုင်ပါသေး၏
လက်ပံပွင့်တွေမြင်တော့ ခွေးတော့ရူးမရူးမသိ မိဗုံတော့ ရူးချင်နေပြီတော် ရွာက ချက်စူတို့ သာအေးတို့နဲ့ လက်ပံပွင့်ကောက်ရတာကို ပြန်လွမ်းသွားလို့ မိဗုံတို့ဆီက လက်ပံပင်ကြီးတွေ ဖေပေါက်ကြီးတွေ့ရရင် ဘယ်လောက်များ တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်မလဲလို့တွေးမိပါရဲ့ လက်ပံပင်ကြီးတွေ တန်းစီပေါက်နေတာ အရောင်လည်းမတူဘူး တစ်ပင်က လိမ်မော်နည်းနည်းသမ်းတယ် တစ်ပင်က အနီရဲရဲ တစ်ပင်က ကြက်သွေးရင့်ရင့် အဲ့လိုမျိုးတွေ ပေါက်နေကြတာ အရမ်းလှတယ် အပင်ကြီးတွေကလည်း အကြီးကြီးတွေ ရွက်ကြွေချိန်ဆို ဒူးဆစ်အထိမြုပ်တယ် ဖေပေါက်အလည်လာရင် လက်ပံပွင့်ခြောက်ကို နေ့တိုင်းချက်ကျွေးမယ်
၀တ်ဆံနဲ့အူတိုင်ကို နေလှမ်း၊ ပီး ချဉ်ပေါင်သီး အခွံနဲ့ ရောချက်စားခဲ့ကြတာလေး…
အဲသမှာ လက်ပံပင်တွေမှ နည်းဘူးကြီးဗျာ။
အပွင့်တွေကလဲ ကြီးမှကြီး လှလဲလှ။
လက်ပံပွင့်တွေ လေတိုက်ကြွေလိုက်တဲ့အခါ တ၀ဲဝဲလဲလို့ လေယာဉ်ပမာ…….ဆိုတဲ့သီချင်းကို သွားသတိရမိတယ်။ လေးပေါက်က ဓာတ်ပုံရိုက်ကောင်းသလို ဓာတ်ပုံနာမည်ပေးလည်းကောင်းသားပဲ ကဗျာဆန်ပါ့။ မခို့ တရို့ လက်ပံကို သဘောကျတယ်။
လက်ပံဖူးချိန် ခွေးရူးချိန်မဟုတ်ဝူးလား ကပေါက်ရယ်…
လက်ပံပွင့်ချိန် ခွေးရူးချိန်က ဘယ်လိုမှ ကာရံမကိုက်…
အတည်ပေါက် ၀င် ဆြာလုပ်သွားချင်း
ကိုပေါက်ရဲ့ လက်ပံ ပွင့် ပုံလေးတွကြည့် သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတွေပါ ပြန်ဖတ်ရ ပြီး ဘယ်ဆီရယ် မသိ လွမ်းမိ ပါကြောင်း။
ရွှေညာသူ..မေပျိုချောတို့ စက်ဘီးလေးတွေစီးကာ ကိုယ်စီ…
ရွှေခြေကျင်းနဲ့ တစ်မျိုးလေးလှတာ အတွေးဝယ်မြင်ယောင်သည်…
အရင်က လက်ပံပွင့်ချိန်ဆို တောင်သမန်အင်းစောင်းမှာ
အဲဒီခေတ်က စက်ဘီးခေတ်ဆိုတော့ လက်ပံပင်အောက်ထိုင်ပြီး လွမ်းဘို့အရေး စက်ဘီးကို
အိုး ရှာလပါတ်ရည် …
ရဲပတောင်းခတ်နေတာပဲ လှတာဗျာ၊ နှလုံးသားထဲတောင် နီသွားတယ် ။ နားထဲဆက်ရက် သံတွေ ဆူညံသွားတာပဲ။ ကျေးဇူးပဲဗျို့။
ညနေစောင်းများရောက်ရင် ဇရက်တွေဆူညံနေတာ များ
ပန်းခြောက်က.. . ညိုညစ်ညစ်နဲ့မို့.. ဒီလောက်နီနေတဲ့အပွင့်တွေမှန်းမသိခဲ့..
လက်ပဲံပွင့်ခြောက်ကို ပုန်းရည်ကြိးထဲ့ ဇီးချဉ်သီးလေးထည့်ကျို
ကြက်သီဖြူနီလေး ဆီသတ် ငံပြာရည်ချက်ကလေး နဲ့ ထနောင်းရွက်ပြုတ်လေးနဲ့
အဖေကအညာသားဆိုတော့.. အမျိုးစပ်ပြီး ကြိုက်တာလားမသိ..
ဘာနဲ့ မှမလဲနိုင်ဘူး။ရင်ထဲမှာအေးမြပြီးနေတာ။ ပန်းတွေကိုချစ်တတ်တော့ပန်းတွေကို
ငယ်ငယ်ကပန်းချစ်တတ်လို့ ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေက ခုထိမေ့လို့ မရဘူး။
ဒီအချိန်ရောက်ရင် ဝေဒနာဟောင်းကပြန်ပြန်ပေါ်တယ်။ လက်ပံပင်ကိုအရမ်းချစ်လို့ ပါ။
နွေဦးရာသီနွေနေ့ လည်ခင်းတွေမှာ လေရူးကတစ်သုန်သုန်တိုက်ခတ်လာရင်
လက်ပံတွေကကြွေကြွေပြီး ကျလာတာ လှမှလှပါဘဲ။
အပင်အောက်မှာ လက်ပံပွင့်ကောက်ရတာ ကလေးဘ၀ဆိုတော့ အရမ်းပျော်တာပေါ့။
ပျော်ပြီးရင်ငိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိက ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဟာလဲ မှန်မှမှန်ပါဘဲ။
နွေဦးရာသီနဲ့ လက်ပံပွင့်ချိန်က အလွန်ကိုလိုက်ဖက် လှပတယ်ဆိုတာကို ပြောပြလိုက်ပါရစေ ။ ။
ငယ်ငယ်က စားခဲ့ရတဲ့ ချဉ်ပေါင်းလေး တောင် သတိရလာပြီ
လက်ပံခြောက်သာ မပါရင် ချဉ်ပေါင်း(ဟင်းပေါင်း) မပီသ သလိုပဲ
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က တောင်မြို့(အမရပူရ)မှာ နေတုန်းက ဒီအချိန်ဆိုလက်ပံပွင့်တွေကောက်
ချဉ်ရေကျိုပြီး ချက်ကျွေးတာ စားခဲ့ရတာ သတိရစရာဗျာ.။
လက်ပံပွင့်ချိန်နဲ့ ခွေးရူးတတ်တဲ့အချိန်ကတူနေတာဖြစ်မယ် ပူတဲ့ရာသီဆိုရင် လူရော၊ ခွေးရောရောဂါထတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါ့ပုံတွေအရမ်းလှတယ် လေးပေါက်ရေ။
ဒီရာသီက အလွမ်းရာသီ အေ့။
အော်လက်ပံပွင့်ဆိုတာဒါကိုး။ သိဘူးဗျာ..ကျုပ်အဖွားအိမ်ရှေ့မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်။ စားရကောင်းမှန်းတောင်မသိဘူး။သူများတွေ လာတောင်းကောက်တာတော့တွေ့ဘူးတယ်။ ဒီလောက်တော့ အပွင့်မကြီးဘူး။ အခုလောလောဆယ်သတိရသွားတာတော့..ကျုပ်တို့ အညာက..မလွှပွင့်နဲ့ မြေပဲဆံချက်ပဲ..ကောင်းချက်ကတော့ဗျာ..စားဘူးမှသိမယ်။
mirror follow air ginger !
မှန် လိုက် လေ ချင်း
ဒါပေမယ့် လက်ပံခေါင်းချဉ်ရေဟင်းက တော့ အရမ်းကောင်းပါ၏။
ဒီဟင်းတွေချက်ကျွေးတဲ့အ ဖွားကို သတိရသွားတယ်။
ကျနော်အဖွားကွယ်လွန်တာ 5-2-1984 လွမ်းမိပါ၏။
နံပါတ်၃ မြေခကြွေကျက ပန်းချီကားကြီးကျနေတာပဲ
ငယ်ငယ်က လက်ပံပွင့်ချိန်ဆိုရင် လူကြီးတွေနဲ့ လက်ပံပွင့်ကောက် လိုက်သွားတာ သတိရမိတယ်။
ကိုပေါက်ပြောတဲ့ လက်ပံပွင့်ကောက် သီချင်းကတော့ ကလေးဘ၀တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ဆိုကြ ကကြရင် ဆိုနေကျ။
အပျော်လိုက်သွားပြီး ကောက်တာပဲ မှတ်မိပြီး ကောက်လာတဲ့ အပွင့်တွေ ဘာလုပ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
လက်ပံပွင့်ကို ချက်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ ခုမှပဲ သိတော့တယ်။
ပုံလေးတွေက လှမှလှပဲ။ :hee:
အပွင့်နီနီ ဇရက်တွေက ပကျိပကျိနဲ့
သေသေချာချာ မမြင်ဘူး ခဲ့တဲ့ လက်ပံပွင့်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ရေ။
လက်ပံပင် ဆက်ရက် (ဇရက်) ကျသလိုဘဲ ဆိုတဲ့ စကားပုံ လို ရော အပင်မှာ ဆက်ရက် တွေ မရှိဘူးလား။
နံပါတ် (၂) က အကောင်တွေက ဆက်ရက် တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
လက်ပံပင်မှာ ဇရက်တွေ ၀ဲနေရင် ဆူညံနေတာဘဲ။
အခုအကောင်တွေက တော့ ကျီးကန်းတွေပါ ကိုလတ်ရေ။
ဇရက်နဲ့ပုံမနှစ်က တင်ဘူးတယ် ။
နောက်ရက်သွားပြီး ရိုက်တင်ပေးမယ် လက်ပံမတုံးသေးဘူးလေ။
လက်ပံခြောက်ချက်စားတယ်သာကြားဖူးတာ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။
ကိုပေါက်ကို ပါဆယ်နဲ့ ပို့ခိုင်းရမယ်။
မထူးပါဘူး အီးဇီးကွတ်ဝေေ၀ဆီ လက်ပံပွင့်ခြောက်တွေပို့ပြီးချက်စားကြရအောင်။
နံပါတ် (၃) ပုံကို မြင်တော့ …
ကျုပ်တို့ ရွာချောင်း နံဘေးက …
လက်ပံပင်ကြီးကို သတိရလိုက်တာဗျာ …
လက်ပံပွင့်တွေ ကောက်ခဲ့တာကိုလည်း …
ပြန်လွမ်းသလိုလို ဖြစ်မိပါသေးရဲ့ …
ခွေးရူးချိန် ဆိုလို့ …
ဟုတ်တယ် .. ရွာမှာ လက်ပံတွေ ပွင့်တိုင်း ..
ခွေးတွေလည်း ရူးတတ်တယ် ….
အဲ့ဒါကြောင့် လက်ပံတွေ ပွင့်ချိန်ဆို …
အိမ်က အမြဲ သတိပေးတယ် …
ဘယ်လို ခွေးပုံမျိုးဆို အနား မကပ်နဲ့ … ဘာညာ ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာ ….
ပုံတွေအတွက် ရှဲရှဲပါ ဖေပေါက်ဂျီးရေ ….
ချောင်းနံဘေးမှာ ချောင်းသေးသလား မောင်မောင်အံ။
3 မြေခ ကြွေကျ ပုံလေးကတော့ ရှယ်ပဲ ပန်းချီကား တချပ်လိုအရမ်းကြည့်လို့ ကောင်းတယ်…..
ဒင်ကျီး ဟိုး…..ဟဲ့ ငါးရိုးထွက်
ငါးရိုးစူး တဲ့သူတွေ အတွက် အမြန်ဆုံး သက်သာနိင်တဲ့ ဂါထာပေါ့…
အဖွားပြောတာ ကြားဖူးနေလို့ ထွက်မထွက် တော့ မသိဘူး စမ်းကြည့်ကြပါ……………:)